ခေါင်းဆောင်မှု - Sorrento Therapeutics
ဒေါက်တာ Royal သည် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို အနှစ် ၂၀ ဖြင့် ဆေးဝါးဆိုင်ရာ အမှုဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သည်။ မကြာသေးမီက၊ သူသည် Suzhou Connect Biopharmaceuticals ၏ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအရာရှိချုပ်ဖြစ်ပြီး ၎င်းမတိုင်မီက Concentric Analgesics ဖြစ်သည်။ သူသည် ယခင်က EVP ဖြစ်ခဲ့ဖူးသည့် Sorrento ၊ Clinical Development and Regulatory Affairs 20 တွင် ပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့သည်
သူသည် NCEs၊ 505(b)(2) နှင့် ANDA အပါအဝင် အောင်မြင်သော NDAs အများအပြားတွင် တာဝန်ရှိသည် သို့မဟုတ် ပါဝင်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
ဒေါက်တာ Royal သည် နာကျင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု၊ စွဲလမ်းမှုဆေးဝါးနှင့် တရားဝင်ဆေးဝါးဆိုင်ရာ အပိုအရည်အချင်းများနှင့်အတူ ပြည်တွင်းဆေးဝါး၊
သူသည် University of Pittsburgh Medical Center ရှိ Uniformed Services University of Health Sciences မှ ဆေးပညာ လက်ထောက်ပါမောက္ခ၊ Oklahoma တက္ကသိုလ်နှင့် University of California San Diego မှ တွဲဖက်ပါမောက္ခဖြစ်ခဲ့သည်။
သူသည် စာအုပ် အခန်းပေါင်း ၁၉၀ ကျော်၊ သက်တူရွယ်တူ သုံးသပ်ထားသော ဆောင်းပါးများ၊ နိုင်ငံတွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာ အစည်းအဝေးများတွင် ဖိတ်ကြားထားသော ဟောပြောသူအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
ဒေါက်တာ Brunswick သည် US FDA တွင် 35 နှစ်ကျော်၊ ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာစင်တာ၊ Monoclonal Antibodies ဌာနခွဲအပါအဝင် Regulated Industry တွင်9နှစ်အထက်ရာထူးများရှိသည်။
Sorrento သို့မ၀င်မီ၊ ဒေါက်တာ Brunswick သည် ညင်သာပျော့ပျောင်းသော ဆီးကျိတ် hyperplasia နှင့် ဆီးကျိတ်ကင်ဆာအတွက် ဆေးဝါးထုတ်လုပ်သည့် ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည့် Sophiris Bio တွင် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးနှင့် အရည်အသွေးဆိုင်ရာ အကြီးအကဲဖြစ်ခဲ့သည်။ ထိုမတိုင်မီက သူသည် G Protein receptors များတွင် ညွှန်ကြားသည့် ကုထုံးများကို အထူးပြုသည့် Arena Pharmaceuticals ၏ စည်းမျဉ်းရေးရာ အကြီးအကဲဖြစ်ခဲ့သည်။
Dr. Brunswick သည် အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါနှင့် နာကျင်မှုဒြပ်ပေါင်း၊ ziconotide ကို အာရုံစိုက်သည့် Elan Pharmaceuticals မှ ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ကို ဦးဆောင်ခဲ့သည်။
ဒေါက်တာ Allen သည် ဇီဝနည်းပညာလုပ်ငန်းတွင် 15 နှစ်ကျော်ကြာ ဦးဆောင်သုတေသနပြုခြင်း၊ ဆေးဝါးကုသခြင်းဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် ဗိုင်းရပ်စ်ဆန့်ကျင်ရေးနှင့် ကင်ဆာရောဂါကုထုံးများကို အစောပိုင်းလက်တွေ့ထုတ်လုပ်ခြင်းတို့ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
Sorrento သို့မ၀င်မီ၊ ဒေါက်တာ Allen သည် Oregon ဘာသာပြန်သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအင်စတီကျု (OTRADI) ၏ သိပ္ပံဒါရိုက်တာအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး ဆေးဝါးရှာဖွေတွေ့ရှိမှုနှင့် ကင်ဆာရောဂါများ၊ အစိုင်အခဲအကျိတ်များနှင့် ကူးစက်ရောဂါဆိုင်ရာရောဂါပိုးများကို ပစ်မှတ်ထား၍ ကူးစက်ရောဂါများကို ပစ်မှတ်ထားသည့် လှုပ်ရှားမှုများတွင် နယ်ပယ်နှင့် ပညာရပ်ဆိုင်ရာ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
OTRADI မတိုင်မီတွင် ဒေါက်တာ Allen သည် bunyavirus နှင့် filovirus မိသားစုများရှိ ဗိုင်းရပ်စ်များကို ပစ်မှတ်ထားသည့် ဗိုင်းရပ်စ်များကို ပစ်မှတ်ထားသည့် SIGA Technologies တွင် ရှာဖွေတွေ့ရှိမှု ပရိုဂရမ်များကို တီထွင်ခဲ့ပြီး ကျယ်ပြန့်သော spectrum of human viruses နှင့် intracellular ဘက်တီးရီးယားများကို တိုက်ဖျက်ရန် ညွှန်ကြားထားသည်။
ဒေါက်တာ Xu သည် ဇီဝနည်းပညာ လုပ်ငန်းများတွင် အမှုဆောင်အရာရှိအဖြစ် အနှစ် 20 ကျော် အတွေ့အကြုံရှိသည်။ Dr. Xu သည် ACEA Biosciences ၏ ဥက္ကဌနှင့် CEO (Agilent မှ 2018 တွင်ဝယ်ယူခဲ့သည်) နှင့် ACEA Therapeutics (ကရယူခဲ့သည်) Sorrento Therapeutics 2021)။ သူပါဝင်တယ်။ Sorrento Therapeutics ဝယ်ယူပြီးနောက်တွင် ACEA ၏ လုပ်ငန်းခွဲတစ်ခုဖြစ်သည့် ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ Sorrento Therapeutics.
သူသည် ACEA တီထွင်ဆန်းသစ်သော ဆေးပိုက်လိုင်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ လက်တွေ့လေ့လာမှုများနှင့် cGMP ထုတ်လုပ်သည့် စက်ရုံအတွက် စီမံခန့်ခွဲပြီး တာဝန်ယူခဲ့သည်။
သူသည် Roche Diagnosis နှင့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၊ ACEA ၏ မူပိုင်နည်းပညာနှင့် ထုတ်ကုန်များကို ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့် ACEA Biosciences ၏ ဒေါ်လာ သန်း 250 ဖြင့် Agilent acquisition အတွက် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခဲ့သူဖြစ်သည်။
သူသည် Gladstone Institutes, The Scripps Research မှ ဝန်ထမ်းစုံစမ်းရေးမှူးနှင့် သုတေသနပညာရှင်ဖြစ်သည်။
အင်စတီကျုနှင့် အမေရိကန် ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနှင့် ကာကွယ်ရေးစင်တာများ။ သူသည် US မူပိုင်ခွင့် 50 ကျော်ပိုင်ဆိုင်သည်။
မူပိုင်ခွင့်လျှောက်ထားပြီး နိုင်ငံတကာဂျာနယ်များတွင် သုတေသနဆောင်းပါး ၆၀ ကျော် ထုတ်ဝေခဲ့သည်။
သိပ္ပံ၊ PNAS၊ သဘာဝဇီဝနည်းပညာနှင့် ဓာတုဗေဒနှင့် ဇီဝဗေဒ။
BS, MS, နှင့် MD
ဒေါက်တာ Sahebi သည် Sorrento ၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆောင်တာများကို ဦးဆောင်သည်။
Sorrento သို့ စျေးကွက်ရှာဖွေရေး သိပ္ပံနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဗျူဟာ အပါအဝင် ဆေးဝါးဆိုင်ရာ အတွေ့အကြုံ အနှစ် 30 ကျော်ကို ယူဆောင်လာပါသည်။
Sorrento သို့မ၀င်မီ၊ သူသည် Novartis၊ Pfizer၊ နှင့် Lilly တို့နှင့်အတူ အကြီးတန်းစီမံခန့်ခွဲမှုရာထူးများကို ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာ၊ အဆစ်အမြစ်ရောင်ရမ်းမှု၊ အာရုံကြောသိပ္ပံ၊ ဆီးချိုရောဂါနှင့် ကင်ဆာရောဂါနယ်ပယ်များတွင် ထုတ်ကုန် 20 ကျော်၏ သိသာထင်ရှားသောအရောင်းအ၀ယ်တိုးတက်မှုအတွက် တာဝန်ရှိသော စီးပွားဖြစ် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့် ဒေတာမောင်းနှင်သည့် စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဗျူဟာများကို ဖော်ဆောင်ခဲ့သည်။
ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သော ယဉ်ကျေးမှုများသည် အောင်မြင်သောအသင်းများကို ဖန်တီးပေးသည့် ခိုင်မာသောယုံကြည်သူဖြစ်သည်။
အမေရိကား၏ ဆေးဝါးစီမံခန့်ခွဲမှု သိပ္ပံအသင်း၏ ဥက္ကဋ္ဌ၊
BA, MBA နှင့် Ph.D.
အမှုဆောင်ဒုဥက္ကဋ္ဌ၊ ဘဏ္ဍာရေးအရာရှိချုပ်၊ စီးပွားရေးအရာရှိချုပ်
မစ္စ Czerepak သည် ဆေးဝါးများ၊ ဇီဝနည်းပညာနှင့် အကျိုးတူအရင်းအနှီးများတစ်လျှောက် ဘဏ္ဍာရေးနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှု ၃၅ နှစ်ကျော်ရှိသည်။ သူမသည် မကြာသေးမီက ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ကင်ဆာရောဂါကုထုံးကုမ္ပဏီ BeyondSpring Inc. ၏ EVP နှင့် ဘဏ္ဍာရေးအရာရှိချုပ်အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ၎င်းမတိုင်မီတွင်၊ သူမသည် Genevant Sciences အတွက် စီးပွားရေးအရာရှိချုပ်၊ lipid နာနိုအမှုန်များပေးပို့သည့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုနှင့် အခြားဇီဝနည်းပညာများစွာအတွက် ဘဏ္ဍာရေးအရာရှိချုပ်အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ မစ္စ Czerepak သည် Bear Stearns နှင့် JPMorgan ၏ မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာဟောင်းအဖြစ် 35 နှစ်ကြာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အတွေ့အကြုံရှိပြီး Bear Stearns Health Innovventures LP ၏ အထွေထွေပါတနာအဖြစ် မစ္စ Czerepak သည် အကြီးတန်းခေါင်းဆောင်မှုရာထူးများတွင် ဆေးဝါးကြီးကြီးများတွင် 10 နှစ်ဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကို စတင်ခဲ့သည်။ ဘဏ္ဍာရေး၊ မဟာဗျူဟာစီမံကိန်း၊ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် ကုန်သွယ်မှုစတင်သည့်အဖွဲ့များ။ သူမသည် BASF Pharma ၏ရောင်းချမှုတွင် Abbott ကို $18 ဘီလီယံဖြင့်အဆုံးသတ်ခဲ့သည့် D2E7 (Humira®) အတွက် ကမ္ဘာ့ပါတနာရှာဖွေမှုကို ဦးဆောင်ခဲ့သည်။ သူမသည် Roche ၏ Syntex ကို $6.9 ဘီလီယံဖြင့် ဝယ်ယူမှုတွင် အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ခဲ့သည်။ နှစ်များတစ်လျှောက်၊ သူမသည် ထိပ်တန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများဖြင့် CFO နှင့် ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအဖြစ် သူမ၏ ပံ့ပိုးကူညီမှုများဖြင့် ဇီဝနည်းပညာကုမ္ပဏီများအတွက် ဒေါ်လာသန်းရာပေါင်းများစွာ စုဆောင်းရာတွင်လည်း အရေးပါလာခဲ့သည်။ မစ္စ Czerepak သည် Marshall University မှ Marshall University မှ စပိန်နှင့် သင်္ချာပညာဘွဲ့ BA ဘွဲ့ နှင့် Rutgers University မှ MBA နှင့် Harvard Business School မှ ကော်ပိုရိတ်ဒါရိုက်တာ Certificate ရရှိထားသူဖြစ်သည်။
အကြီးတန်းဒုတိယဥက္ကဌ၊ ကော်ပိုရိတ်ဆက်သွယ်ရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူဆက်ဆံရေး
ဇီဝဆေးဝါးနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းသိပ္ပံလုပ်ငန်းတွင် နှစ် 30+ အတွေ့အကြုံ
Mr. Cooley သည် Fortune 500 ကုမ္ပဏီများတွင် အရောင်း၊ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်ရာ ခေါင်းဆောင်ရာထူးများကို ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး အောင်မြင်သော ရန်ပုံငွေရှာဖွေခြင်းနှင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနည်းပညာကုမ္ပဏီများအတွက် ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများကို ဦးဆောင်ခဲ့သည်။
Sorrento သို့မ၀င်မီ၊ Mr. Cooley သည် ဆီးချို၊ အာရုံကြောပညာ၊ ရောဂါဗေဒနှင့် ရှားပါးရောဂါများအပါအဝင် ရောဂါနယ်ပယ်များရှိ Eli Lilly နှင့် Company နှင့် Genentech နှစ်ခုလုံးတွင် P&L တာဝန်ဖြင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စျေးကွက်ရှာဖွေရေး ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများကို ဦးဆောင်ခဲ့သည်။
ထို့အပြင်၊ သူသည် နိုင်ငံတကာနှင့် US တွင် နှစ်ရပ်စလုံးအတွက် သိသာထင်ရှားသော BD၊ လိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်းနှင့် ပေါင်းစည်းရေးကြိုးပမ်းမှုများကို ဦးဆောင်ခဲ့ပြီး ၎င်းတွင် ဥရောပ၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့် အာဖရိက နှင့် လိုင်စင်အတွက်၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်နှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်များစွာ ပါဝင်ပါသည်။ ပထမဆုံး GLP-400 agonist
မကြာသေးမီက၊ မစ္စတာ Cooley သည် Kimberly-Clark ရှိ Sofusa Business Unit အတွက် CBO ဖြစ်ခဲ့ပြီး အောင်မြင်သောရောင်းချမှုနှင့် ပေါင်းစပ်ကြိုးပမ်းမှုကို ဦးဆောင်ခဲ့သည်။ Sorrento Therapeutics. သူသည် Sorrento တွင် Lymphatic Drug Delivery စနစ်များဌာနခွဲကို ဆက်လက်ဦးဆောင်နေပါသည်။
စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ အရောင်းနှင့် မူးယစ်ဆေးဝါးရှာဖွေတွေ့ရှိမှု၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများတွင် အတွေ့အကြုံ နှစ် 30+ ရှိသူ
Sorrento သို့မ၀င်မီ၊ Mr. Farley သည် HitGen၊ WuXi Apptec၊ Key Accounts တည်ဆောက်မှု၏ VP နှင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ BD အဖွဲ့ကို ဦးဆောင်ခဲ့သည်။ ChemDiv မှ BD ၏ VP သည် CNS၊ Oncology နှင့် Anti-infectives တွင် ကုထုံးကုမ္မဏီအသစ်များဖန်တီးရန် ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများစွာကို ဦးဆောင်ခဲ့သည်။
Mr. Farley သည် Xencor၊ Caliper Technologies နှင့် Stratagene တို့ကဲ့သို့ ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီး စီးပွားဖြစ်ဖန်တီးရန်အတွက် အမှုဆောင်စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့များနှင့် BOD အသီးသီးတွင် အတိုင်ပင်ခံအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
သူသည် ဆေးဝါးကုမ္ပဏီများ၊ ဇီဝနည်းပညာနှင့် Venture Capital အသိုင်းအဝိုင်းတစ်လျှောက်တွင် ခိုင်မာသောကွန်ရက်တစ်ခုကို တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ Mr. Farley သည် များပြားလှသော ညီလာခံများတွင် ဟောပြောခဲ့ပြီး သက်တူရွယ်တူ သုံးသပ်ချက် ဂျာနယ် အမျိုးမျိုးတွင် ထုတ်ဝေခဲ့သည်။
Neurotherapeutics BU အကြီးတန်းဒုတိယဥက္ကဌ
ဒေါက်တာ Nahama သည် RTX လူသားနှင့် တိရိစ္ဆာန် ကျန်းမာရေး ဆေးဝါး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ပရိုဂရမ်များကို ဦးဆောင်သည်။
အဖွဲ့ဝင်ခေါင်းဆောင်မှုအဖွဲ့အနေဖြင့် ဒေါက်တာ Nahama သည် မဟာဗျူဟာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ပံ့ပိုးပေးကာ၊ တန်ဖိုးမြင့်စီမံကိန်းများကို ကြီးကြပ်ကာ စျေးကွက်ပြင်ဆင်မှုသို့သွားရန် လွယ်ကူချောမွေ့စေကာ ပြင်ပမဟာမိတ်ကြိုးပမ်းမှုများကို ပြုစုပျိုးထောင်ပေးသည်။
အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များအတွက် အခြားမရနိုင်သော နည်းပညာများကို ယူဆောင်လာစဉ် လူသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအစီအစဉ်များကို အရှိန်မြှင့်ရန် ဘာသာပြန်အခွင့်အရေးများကို စိတ်အားထက်သန်စွာ တွန်းအားပေးသည်
Sorrento သို့မ၀င်ခင်တွင် Sanofi၊ Colgate၊ Novartis၊ Merck၊ VCA Antech နှင့် VetStem Biopharma အတွက် Life Sciences နှင့် Biotechnology တို့တွင် တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အမှုဆောင်ရာထူးများကို 25 နှစ်ကျော်ကြာ ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
နာကျင်မှုဧရိယာရှိ R&D ကို အဓိကထားကာ အစောပိုင်းအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဖြင့် DVM (အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များအတွက် ဆေးခန်းစမ်းသပ်မှုများ)